Ammunition used by suspected al Shabaab assailants killed during an attack is displayed outside Somalia's regional government headquarters in the central city of Baidoa, March 12, 2015.
Shakkamtoonni al-Shabab torba naannoo Somaaliyaa Kaaba gama ba’aa utaa Puntland keessatti har’a itti dhukaafamuun ajjeefamuu angawoonni beeksisaniiru.
Abbaan alangaa mana murtii waraanaa Puntlaand Abdullaahii Hersii Elmii murtii dubbisaan dhageessianiin namoonni torbanuu himannaa ajjeechaa fi shorokeessummaa irratti dhiyaateen itti murtaa’e jedhan. isaan keessaa tokko balleessaa isaa amanee jira jedhan.
Namoonni shan keellaa sakatta’aa Bosaasoo cinatti kan qabaman baatii Ebla darbee yoo ta’eu dhuka’aa gara magaalattiitti seensisuuf yaalaa kan turan ta’uu angawoonni beeksisanii jiru.
Namoonni kun sadan umuriin isaanii waggaa 20-22 yoo ta’u tokko waggaa 26 inni shanaffaan immoo umuriin waggaa 27 ta’uun beekameera.
Manni murtii akka jedhetti himatamtoonni hafan lamaan kanneen Gaalkayoo keessatti bara 2015 to’annaa jala oolanii murtii du’aa eeggataa turan har’a ajjeefaman. Kanneen keessaa tokko angawoota naannoo dabalatee ajjeechaa namoota 23 keessaa harka qabaachuu amaneera jedhan Elmiin.
Puntlaand duraan ijoollee umuriin isaanii xiqqoo ta’e shakkamtoota Al-Shabab ta’an ajjeesaa turte jechuun Amnestiin qeeqee jira. Baatii Ebla keessa kanneen umuriin 14 fi 17 ajjeefamuu illee ibsee jira.
Gama biraan boombiin har’a har’a galgala Moqaadishoo keessatti dho’e angawaa waraana Somaaliyaa tokko galaafatee kaan madeessee jira.